आफ्नोपनको संरक्षण आवश्यक :: युवराज वस्ताकोटी – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
आफ्नोपनको संरक्षण आवश्यक :: युवराज वस्ताकोटी
नेपालको समग्र आर्थिक बृद्धिदर दुई अंकको कहिले होला ? सम्पूर्ण नेपालीले पूर्ण रोजगारी प्राप्त गरेको अवस्थाको कल्पना मात्रले पनि मनै प्रफुल्ल बन्दछ । ३० वर्षको अवधिमा सिंगापुर जस्तो सानो देश आर्थिक स्वर्ग बनेको छ । मलेसिया एउटा उष्ण हावापानी भएको भूमध्यरेखीय देश संसारभरका लाखौ मजदुरहरुलाई रोजगारी प्राप्त गर्ने केन्द्र नै बनेको छ । प्रचुर सम्भावना बोकेको भए पनि हाम्रो देश नेपाल भने गरिबी, अशान्ति र बेरोजगारीको पीडाबाट मुक्त हुन सकेको छैन । आश्रित अर्थतन्त्र भएको यो देशका झण्डै २५ प्रतिशत जनता भारत लगायत विदेशी भूमिमा श्रम जीवन व्यति गर्न बाध्य छन् । भारतीय गोरखा सैनिक, विभिन्न प्रान्तिय तथा नगर प्रहरी सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुरक्षा गार्ड, सहयोगी लगायत केही अधिकारी तहको रोजगारीमा भारतमा श्रम गर्नेहरु केही लाख मानिसहरु होलान् यद्दपी यथार्थ तथ्याङक हामी पाउन सक्दैनौ । त्यसगरी झण्डै २५ लाख नेपाली खाडि लगायत यूरोप, अमेरिकी क्षेत्रमा गएका होलान् र वर्षेनी ४/५ लाख जनसंख्यालाई नेपालले रोजगारीका नयाँ अवसर प्रदान गर्नुपर्ने हो तर त्यसो हुन नसक्दा यति ठूलो प्रभावकारी उत्पादनशील जनशक्तिले विदेशमा श्रम बेच्न जान परेको हो ।
विशेषत केही वर्ष यता नेपाली युवाहरुमा राजनीति प्रति वितृष्णा बढेर आइरहेको पाइन्छ । अपवाद र कमजोर शिक्षा प्राप्त गरेका केही युवाहरुलाई छाड्ने हो भने नीजि शिक्षालयबाट उत्पादित जनशक्तिले नेपालमा आफनो भविष्य देख्न छाडेका छन् । उनीहरुको मस्तिष्कमा नेपाली नेतृत्व प्रति तिव्र असन्तुष्टि र घृणाभाव भएको बुझन गाह्रो छैन । विशेषत नवयुवाहरुमा पाइएको यो तहको अविश्वासले नेपालको भविष्य उज्वल पार्ने हो भने वर्तमान नेतृत्पमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक छ । सबभन्दा पहिले नेपालको वास्तविकतालाई पत्ता लगाउनु पर्दछ । यहाँको भूगोल, स्रोत साधन र सम्भाब्य अवसरहरु बारे व्यापक अर्थमा अध्ययन अनुसन्धान हुन पर्दछ । आम नेपाली नागरिकमा नेपाल, नेपाली धर्म, संस्कृति र परम्पराप्रतिको सम्मानमा वृद्धि हुनु पर्दछ ।
नेपाली विविधताको यथार्थलाई सम्पूर्ण नागरिकले स्विकार गर्नु जरुरी छ । मेरो देश र मेरो धर्म संस्कृति र परम्परा भन्ने वाक्याशलाई मूल नारा बनाइनु पर्दछ । काम गर्न सक्नेलाई काम दिन सकियो र उत्पादन बढाउन हो भने मात्र पनि ठूलो परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । कुनै पनि देशको पहिचान भनेको त्यो देशको धर्म, संस्कृति र परम्परा हो । नेपालमा रहेका विभिन्न पहिचानको संरक्षण र सम्वर्धन गर्दै तिनीहरु बिचमा उच्च स्तरिय एकता कायम गराउन सक्ने हो भने मात्र राष्ट्रियता माथिको रखवाली गरिएको ठहरिनेछ । सबैलाई थाहा छ भूगोल मात्रले राष्ट्र पूर्ण हुदैन । त्यसभित्रका भाषा, धर्म, संस्कृति र परम्पराको एकतृत रुपले राष्ट्रिय पहिचान खुल्ने र त्यही पहिचान सहितको बलियो भूगोलले राष्ट्र पूर्ण हुन्छ । विकास निर्माणमा समग्र देशबासीको सहभागितामुलक अग्रसरताले नै नागरिकहरु बिचमा एकता हुन्छ । कोही खाइरहने कोही हेरिरहने कोही हाँसिरहने कोही रोइरहने कसैलाई विशेष अधिकार कसैलाई शुन्य अधिकारको ब्यवस्थाले राष्ट्रिय एकता कायम हुन सक्दै सक्दैन । जब सम्म राष्ट्रिय एकता कायम रहदैन तब सम्म देश सम्पन्न बन्न सक्दैन । देश सम्पन्न र समृद्ध नभई बेरोजगारी समस्याको समाधान हुन सक्दैन । राष्ट्रिय आम्दानी बढ्ने त कुरै आउदैन अनि कसरी सम्भव हुन्छ राष्ट्रियता माथिको सुरक्षा । जहाँ अभाव रहन्छ त्यहाँ तनाव र द्धन्द रहन्छ त्यहाँक छिमेकीको हस्तक्षेप अवश्य रहन्छ । समग्र राष्ट्र र राष्ट्रियताको सम्बर्धन तब मात्र सम्भव छ जब सम्पूर्ण नागरिकहरुले समान अवसरको प्रत्याभूत गर्न पाउने छन् ।
एक्काइसौं शताब्दि सुचना प्रविधिको युग हो । विश्व एउटा सानो घर झै बन्दैछ । एक तिहाई समयमा विश्वभर हाम्रा कान र आँखा अगाडि आइपुग्दछन् तर हामी नेपालीहरु अझै पनि तेरो र मेरो नाममा द्धन्द गरिरहन्छौ । दुई चार डलर आम्दानिका लागि आफनो मातृभूमिभित्रको संस्कृति र परम्परा माथि बज्रपात गर्दछौ यो वा त्यो आरोप लगाई हाम्रो हिरा मोतीलाई कवाडीमा बेच्दछाँ र अरुको पित्तल तथा चाँदीलाई अमूल्य ठान्दछौं । दुर्भाग्य यहीनेर छ राज्यको बागडोर हातमा लिएकाहरु नै रिमोट कन्ट्रोलको कडा नियमनमा बस्न बाध्य भएका छन् ।
विशेषत नेपाली नवयुवाहरुले नेपालको बहुआयामिक वास्तविकता बुझ्नु जरुरी छ । क्षमतावान र दक्ष व्यक्तिहरु राष्ट्रभित्र देश निर्माणको अभियानमा जुट्नु पर्दछ । काँधमा काँध हातमा हात मिलाई अगाडि बढ्नु पर्दछ । जसका लागि हाम्रो वास्तविक परम्परा, सांस्कृतिक सम्पत्तिको रक्षा तथा प्राकतिक स्रोत र साधनक।े भरपूर सदुपयोग गरी उत्पादनशील कर्ममा आफूलाई समाहित गर्नु पर्दछ ।
८ माघ २०६९, सोमबार २३:१९ मा प्रकाशित